F1 2020 ongororo: Mutambo wematarenda ese
Mitambo yemitambo ine marezenisi zviri pamutemo iyo inobuda gore rega rega inowanzo shingirira kuratidza vatambi kuti ivo vakasiyana zvakakwana kubva mukuedza kwegore rapfuura rekururamisa kutenga kwavo. Zvinoshamisa, iro harisi dambudziko rinotambudza F1 2020.
Software Codemasters yakwanisa kuuya nezvinhu zviviri zvitsva izvo zvinowedzera nekukwidziridza kukwirira kwayo - kune iyo nzvimbo yedunhu kupfuura iyo vangangozviti vega veFormula One Fans.
Uyezve, F1 2020 inoshanda senge yakasarudzika nhoroondo yezvinyorwa, nekuti inotaura nezve "mwaka weghost" uyo muhupenyu chaihwo wakashandurwa kupfuura wese unozivikanwa neCovid-19.
Casual uye pro zvakafanana
F1 2020 inonyanya kukosha chiitiko ndechekuti, zvinoshamisa, izvo izvo ruzhinji rwevaya vanotenga mutambo vachizoregeredza. Iine zita rekuti Casual mode, inodzvinyirira mutyairi kubatsira kusvika pakakwirira, uye inodhira pasi chokwadi mune dzimwe nzira kuitira kuti, semuenzaniso, mota dziite zvine mutsindo kunyangwe panguva dzekufamba-munzira.
Mhedzisiro yacho ndeyekuti inogadzira ivo vatyairi vazhinji-vetsiva, vane sketchiest kubata kwekumhanya mitsetse, kutakura-uremu uye zvichingodaro, vanonzwa semagamba. Casual mode inoshanda kwazvo zvekuti inovhura F1 2020 kune vatambi vanofarira mitambo yeArcade-yekujairira.
Kune avo vanokoshesa hunyanzvi hwavo hwekutyaira, zvakadaro, zvinonzwa senge kubiridzira. Uye iyo zvakare inosanganisa iyo ne (vertical) yakapatsanurwa-screen maviri-mutambi mujaho nzira, ichidzoka kuFomu One mutambo mushure memakore matanhatu hiatus.
Zvichakadaro, vatambi vemitambo vakada kuita sevatariri vezvikwata vakakandirwa ne-on-track chiitiko chavo zvakare yakaverengerwa muF1 2020, iine maitiro matsva anonzi Chikwata Changu.
Izvi zvinotora muitiro weCustomer (iyo ichiri mumutambo) uye inowedzera chimwe chipenga chekufungidzira icho vateveri veForamu One vanofanirwa kuwana chinonakidza: zvinokuita kuti utange basa idzva, rekufungidzira semuridzi-mutyairi (vatyairi vatanga avo maFormula One zvikwata mu zvakapfuura, asi kwete kwemakumi emakore akati wandei).
Nekudaro, pamusoro peiyo imwechete mota-yekuvandudza zvinhu seCustomer mode, iwe unosvika pakuvaka nekuvandudza zvivakwa zvefekitori, zvine chekuita nekuvandudza kwemotokari, kuwedzera kukwezva uye sarudza vanotsigira.
Nekudyara mune akasiyana fekitori zvinhu, unogona kubatsira ako nhamba maviri mutyairi kuvandudza zvikamu zvekumhanya kwavo, uye zvaunoita pane track zvine chirevo chikuru mukukurumidza kuunza timu yako ichangobva kuumbwa kumakwikwi.
Mumaoko emumwe munhu asingasviki pamusoro pemutambo wavo kupfuura maCodemasters, Chikwata Changu chaigona kunge chiri chakazara tsvina. Panzvimbo iyoyo, zviri nyore uye zvine hungwaru, uye zvinokuita kuti unzwe sekunge uri kutora Formula One paddock nedutu.
Zvirinani pane hupenyu chaihwo
Nekudaro, iyo yakasarudzika yakasarudzika yeF1 2020, iyo inoiisa pakarepo kubva kune yakatangira, ndeyekuti nekuda kwekuvapo munyika chaiyo, inokwanisa kunyora izvo izvo 2020 Formula Imwe mwaka ingadai yakaita kunge isina kunge yakaparadzwa ne imwe c-izwi rakadenhwa gore rese.
Muhupenyu chaihwo, mwaka chete wakangotanga munaJuly uine mbiri-mbiri yejaho muAustria, uye kusagadzikana kwakazara kuti ndedzipi nhambo dzichaitika kana idzo sere dzeEurope dzakaiswa.
Gore rino rinofanira kunge rakaona nhangemutange mbiri dzakawedzerwa pakarenda, padunhu nyowani muHanoi, Vietnam; uye Zandvoort, uyo anodiwa-zvakanyanya dunhu reDutch, achidzoka kumutambo kekutanga kubvira 1985. Hakuna wedunhu anozoona mugwara weForamu One gore rino, zvinova zvinonyadzisa, nekuti vese vari mumutambo uye inonakidza kutyaira.
Hanoi yakamanikana munzvimbo, nemadziro ayo inofanirwa kudzivirirwa, asi zvakare isingashamisi-yakakurumidza-kutenderera kwemugwagwa, ine mitsetse mitatu inopa mikana yakawandisa uye zvimwe zvinoshamisa zvinotevedza zvemakona ekumhanya zvakanyanya.
Zandvoort yakafara, yakaderera-kubata uye yakawedzera-yechinyakare, asi iri yechokwadi nzira yevatyairi iyo inopa mubairo wakanyanya kushinga uye kunyatso.
Chero ani zvake akambotamba imwe yemitambo yeCodemasters 'ichangoburwa F1 mitambo angatarisira F1 2020 kuseta nyowani hunyanzvi zviyero zvemitambo yemijaho, uye ndizvo chaizvo zvazvinoita. Inotaridzika kuva yakanaka, uye manzwiro aunowana kubva mumotokari ndeemashiripiti, kunyangwe kuburikidza nemutongi kwete pane vhiri-uye-pedals kutyaira rig.
Nzira iyo matai emota anooneka nayo kutanga kurasikirwa nekubata mushure memakumbo mashoma inopa ruzivo rwakakura mumaitiro madhiraivha chaiwo avanofanira kugona, uye kune mamwe maseketi unofanirwa kuchengetedza mafuta nekusimudza nekumhara. Zvese izvi zvinowedzera mufaro sezvo maGrands Prix achivaka kusvika kumagumo avo.
Iwo maAI-anodzorwa madhiraivhi ane hasha asi akasarudzika - ita chikanganiso uye ivo vachakuranga iwe, asi ivo havazogadziri pamusoro-tariro mapapu kunze kwekunge, zvinoita sekunge iwe uchiratidza hunyanzvi hwekuvhara nzira yako kupfuura mota dziri pamberi - iyo AI inonzwa zvishoma tit-for-tat.
Pamhepo, inyaya yakasiyana paunouya uchipesana nevanhu vatyairi, asi zvirinani mutambo uchishingairira kuburitsa zvirango zvekufamba kunotyisa.
F1 2020 iri zvakare yakanyatsobatanidzwa kupfuura nakare neiyo yepamutemo F1 Esports makwikwi, saka kana iwe ukaratidza mhando yepamberi yekushambadzira tarenda iyo yaizodikanwa kuti iite kune chaicho-chehupenyu gridhi, unogona kuishandisa sechitubu kukwikwidza ne zvikara zvikuru. Asi iwe unogona zvakare kuyedza iyo yepamhepo mvura kuburikidza neasina kubhadharwa maitiro ekudzidzira uye nezvimwe: Codemasters yakasimbisa mutambo wepamhepo padanho nezve pamwe pamwe zvingafungidzirwe.
Chinhu chega cheF1 2020 icho chinorova chero chinhu chakaita sebhuru notsi chinhu chisina basa muchirongwa chikuru chemutambo: madhiraivha anogadzirwa nemakomputa, sezvinoonekwa mune akacheka-zviitiko, angangoita anozivikanwa, asi tarisa kuderera kwechokwadi kuhupenyu. kupfuura mutambo wese. Iyo yemujaho-nhaurirano inogona zvakare kuratidzika kunge tad isina musoro uye isina basa pane dzimwe nguva.
Zvimwe zvakajairika zvakawedzerwa kumutambo, futi, kuti iwe ugone kusarudza kukwikwidza mwaka wakadonhwa nenzira yakanyanya kukura kana uchidaro, uye iine chitoro chenguva dzose dzemota dzemifananidzo kubva nezuro iyo iwe yaunogona kutyaira mune akasiyana mamiriro uye matambudziko. Uyezve ine 2019 yakazara yakazara Formula Mwaka wechipiri.